विद्येयकमा केसीले उठाएका प्रायः माग समावेश छन्, संसदलाई कमजोर पार्ने काम गर्नुहुँदैन् ः डा. दिक्षित
काठमाडौं, १८ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्वमन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले तत्काल अनशन तोड्नुपर्ने बताएका छन्
कुनै पनि बिषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर संसदमा प्रष्तुत हुन आग्रह : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं १८ माघ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सही बाटो र सही नीति लिएको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपां)का साँसदहरुसँग आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले
काठमाडौं, माघ १८ । सिसीटिभी फुटेजको मद्दतले २०७१ सालमा भएको ‘डल्लु हत्याकाण्ड’का अभियुक्त पक्राउ परे । काठमाडौं विजुलीबजारमा २०७२ सालमा मोटरसाईकल चालकको मृत्यु भएको घटनामा फुटेजकै कारण आरोपित ट्याक्सी
माघ १८, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ का छोरा बिहीबार साँझ विराटनगरबाट गोलीसहित पक्राउ परेका छन्। कालिकोट घर भएका २७ वर्षीय
भेनेजुयलाको समर्थनमा बक्तव्य जारी गरेपछि प्रचण्ड र नेपाल सरकारप्रति अमेरीका शसंकीत
माघ १८, काठमाडौं । भेनेजुएलाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे कम्युनिस्ट मुलुकहरुले आफूविरुद्ध वक्तव्य दिएपछि अमेरिका आक्रोशित बनेको छ। उसले ती देशमा आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ। चीन, रुस,
एउटै कोठामा युवा-युवतीको शव भेटीयो
विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका– १४ डिग्री क्याम्पस नजिकै एउटा घरको कोठामा युवा–युवतीको शव भेटिएको छ । अशोकुमार यादवको घरको कोठा भित्र बिहीबार साँझ शव भेटिएको हो
बैंक र अख्तियारकै बदमासी भेटियो, व्यक्तिको करोडौंको जग्गा अर्केको नाममा पास
माघ १७, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल बैंक लिमिटेडको मिलेमतोमा व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिदिएको पाइएको छ । सर्वोच्च
प्रेस काउन्सिल नेपालमा शहीद दिवस यसरी मनाइयो
१६ माघ,शहीद दिवसको अवसर पारेर शहीदप्रति सम्मान गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार स्तम्भमा माल्यापर्ण गरेको छ । कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल,सह–प्रशासकीय
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चिनिया राजदुत भेटवार्ता
काठमाडौँ, १६ माघ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि चिनका नवनियुक्त राजदूत होउ यान्छीले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध,
अधिकारका लागि अब कसैले पनि शहीद हुनु पर्दैन ः प्रम ओली
काठमाडौं,१६ माघ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कसैले पनि अधिकारका लागि शहीद हुनु नपर्ने बताउनुभएको छ । शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन आज काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री
जनआन्दोलनका घाईते तथा सहिद परिवारले रुँदै भने ः राज्यले बिर्सिएपनि ऋषि धमलाले हामीलाई सम्झिए
काठमाडौं, १६ माघ । जनआन्दोलनका घाईते तथा सहिद परिवारले राज्यले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका छन् । यद्धपी उनीहरुले राज्यले नसम्झिएपनि रिपोर्टर्स क्लब र यसका सभापति
नर्भिक अस्पतालले भन्यो, ‘पूर्वयुवराज पारसको मुटु एकदमै कमजोर’,यस्तो छ पुर्व युवराज पारश शाहको स्वास्थ्य अवस्था
काठमाडौँ । पूर्वयुवराज पारस शाहको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ । शाहको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोलीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त
नुवाकोट । माघ १५ । बिबाह भोजमा खाना पकाउने क्रममा अचानक आगलागी हुंदा नुवाकोटमा पाँचलाख रुपयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका २
काठमाडौं– ट्राभल्स क्षेत्रमा प्रतिष्ठित समूहले सञ्चालन गरिरहेको एबल नेपाल ट्राभल एण्ड टुर्सलाई मलेसियन एयरलाइन्सले सम्मान गरेको छ । एबल नेपाल ट्राभल र कान्तिपुर होलिडेजले गरेको कार्यको
दलित महिलासँग बिहे अस्वीकार तर एक्लै भेटे सामूहिक बलात्कार
काठमाडौं, । सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी माया विकका बाबु हर्कबहादुर भन्छन्– बलात्कारीले सजाय नपाएसम्म सरकारको राहत लिन्नँ मेरो नाम हर्कबहादुर विक हो । कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाको
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्य चरेस सहित पक्राउ
बुटवल। रुपन्देहीको बेलवासबाट ठुलो परिमाणमा चरेस बरामद भएको छ । ३७ किलो चरेस सहित ३ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँची जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका
बम दिदिबहिनीले भनें :‘हामी निर्दोष हौंं, दोषी प्रमाणित गरे जेल जान तयार छौं
काठमाडौं, १४ माघ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या काण्डमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको बम दिदिबहिनीले स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणमा
अबैध लागुऔषध सहित पाण्डे नियन्त्रणमा
काठमाण्डौ , माघ १४ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङगाले लागुऔषध सहित १ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले यही माघ १४ गते विहान ०५स्०० बजे सर्लाहीबाट काठमाण्डौ
नेपालको तिव्र विकासका लागि छिमेकीको सहयोग आवश्यक ः प्रम ओली
काठमाडौं,१४ माघ,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको तिव्र विकासका लागि छिमेकीको सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर कलंकी सडक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै
रणभुमि बन्यो बिराटचोक, निषेधाज्ञा टेरेनन् स्थानीयले, सडकमै शव राखेर प्रदर्शन
बिराटचाेक। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बिराटचौकको घटनालाई लिएर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीका अनुसार बिराटचौकदेखी बिराटनगर आउने बेलेपुर क्षेत्रमा बिहान
काठमाडौं, माघ १४ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले चौविसै घन्टा नागरिक र राष्ट्र सेवामा खटिएर इमानदार प्रयास गर्ने प्रहरीलाई समुदायको समेत उल्लेख्य सहयोग प्राप्त हुनेगरी संस्थागत प्रणाली विकास गर्न
काठमाण्डौं । माघ १४ । प्रगतिशील लेखक सङ्घ, प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूको सम्मेलन माघ १६ गते देखि सुरु हुने भएको छ । प्रगतिशील लेखक
ठेक्कामा मनपरी, एउटै कामको लागि ८ पटक सम्म म्याद थप,१ खर्ब १८ अर्ब जोखिममा !
माघ १४, काठमाडौं । ठेक्का अलपत्र भन्नेबित्तिकै अचेल ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ को नाम लिइन्छ । तर, त्यस्ता बेइमान ठेगदार दर्जनौं छन्, जसले १ हजार ८ सय ४८
माघ १४, काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबिनै सरकारद्वारा सरकारसँग ९जीटुजी० सुविधामा मल खरिद गर्न लागेको छ । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव
आउँदो शैक्षिक सत्र देखी स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने कामनपाको निर्णय
माघ १४, काठमाडौं । ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ५ स्थानीय तहको पाठ्क्रम निर्माण गरी लागु गर्ने भएको छ । महानगरका निजी र सामुदायिक
Pages 564 : You are at page 353 of 564